प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारलाई चेतावनी एमसिसी सम्झौता सबै कागजात संसदमा पेस गर्न माग — Imandarmedia.com
१ओलीको कुर्सी खोस्न ईश्वर पोखरेल सक्रिय, एमालेमा खैलाबैला
२ओलीलाई अर्को झट्का, भिम रावलको नेतृत्वमा अर्को २० प्रतिशतको खेल सुरू
३तेस्रो धारका नेताहरुसँग आँट र विद्रोह गर्ने हैसियत अलिकति पनि देखिएन, माधव नेपाल
४तेश्रो पटक संसद विघटन गर्दै देउबा सरकार, देशभर तरङ्ग
५कानुनभन्दा माथि क्रसर डन: सरकार निरीह
६अभिनेता सोनु सुदको कार्यालयमा कर विभागको छापा, कति छ सम्पत्ति ?
७कृषि मन्त्री शाही अर्की महिलासँग पनि लपक्कै, के होला अब ?
८को हुन् कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, के हो राष्ट्रपतिसँगको नाता ?
९तालिबान शासनको एक महिना, जनजीवन कस्तो छ ? भिडियो सहित
१०चीनको सिचुआनमा शक्तिशाली भूकम्प, के छ अवस्था ?
११तालिबान नेता बरादर टाइम म्यागाजिनको सय प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा
१२ओलीलाई फर्केर आउँछु भन्थे, कहिल्यौ नफर्किने गरी विदा भए
काठमाडौँ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एससिसी) सम्झौताको विषयलाई संसद्मा मुद्दा बनाएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक कोसिस गर्दा पनि तत्कालीन सत्तारुढ दलभित्रको विवादका कारण एससिसी संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको थिएन । एमालेमा एमसिसीलाई लिएर दुईथरी मत छ ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद भीम रावलले एमसिसी सम्झौताबारेका सबै कागजात संसद्मा पेस गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले एमसिसीमा कतिपय प्रावधान नेपालको संविधान, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रको हितविपरीत रहेको बताए ।
कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरीले एमसिसीको अमेरिकाबाट भए पनि यस्ता प्रयास अन्य देशबाट पनि हुन सक्ने बताए । ‘यस्तो कुनै प्रयास कुनै दिन हिन्दुस्तानबाट पनि आउला वा आइसकेको होला । चीनबाट आउला, आइसकेको होला । युरोपियन युनियन एउटा शक्तिको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यहाँबाट पनि आउला, उनले भने ।
गिरीले ठोस राष्ट्रिय नीति बनाएर कस्ता सम्झौता पास गर्ने र कस्ता नगर्ने भन्ने बाटो तय गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘पहिला हामी साझा दृष्टिकोण बनाऔँ– भारत, चीन, अमेरिकाप्रति । अनि कुन सन्धि खारेज गर्ने, कुन नगर्ने, कुन राख्ने र नराख्ने तय गर्नुपर्छ । यो राष्ट्रिय नीतिको प्रश्न गिरीले भने ।
गिरीले नेपालले साझा विदेश नीति बनाउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । यो दलतन्त्रका माझमा हाम्रा सरोकारवाला दलहरू किन साझा विदेश नीति बनाउन सक्दैनन् । जबसम्म सबै दलहरू साझा विदेश नीतिका प्रति प्रतिबद्ध हुँदैनन् । हामीहरूमध्ये प्रत्येकले एक–अर्कालाई तल देखाएर, उचा देखाएर मुखको तितो मात्रै पोख्छौँ ।
गिरीले देउवा सरकार असफल हुँदा संविधान असफल हुने बताए । ‘यसपटक असफल हुँदा देउवा मात्र होइन, संविधान असफल हुन्छ । संविधान असफल भएर पनि केही बिग्रिँदैन, व्यवस्था असफल हुन्छ । व्यवस्था असफल हुने भनेको सोच्दा मात्र पनि कहाली लाग्छ ।’ माओवादी सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले जलवायु परिवर्तन र त्यसले सिर्जना गरेका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराए ।